Yaa kusoo baxay 5-ta kursi baarlamaan ee maanta la qabtay doorashadooda? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Yaa kusoo baxay 5-ta kursi baarlamaan ee maanta la qabtay doorashadooda?
Yaa kusoo baxay 5-ta kursi baarlamaan ee maanta la qabtay doorashadooda?
Baydhabo (Dalkaan.com) – Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Koonfur Galbeed waxaa maanta lagu qabtay doorashada shan kursi oo kamid ah xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ka imaanaya dhinaca maamulkaasi.
Kuraasta maanta la qabtay doorashadooda ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaano hore ugu fadhiyay iyo kuwa cusub, waxaana loogu kala guuleystay sidaan hoose;
Kursiga 1-aad: HOP#184 ayaa waxaa ku tartamay laba musharrax oo kala ah Xasan Cabdinuur Cabdi iyo sidoo kale musharrax Maxamed Cabdulaahi Cali, waxaana kursigan kusoo baxay Mudane Xasan Cabdinuur.
Xasan Cabdinuur oo hadda ah wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha, ayaa waxa uu helay codad gaaraya-72 cod, halka musharaxii la tartamayay ee Maxamed Cabdulaahi Cali uu heley 27 cod, sidoo kale waxaa halaabay laba cod.
Kursiga 2-aad: HOP#085 ayaa waxaa ku tartamay Shariif Maxamed Cabdalla oo hore ugu fadhiyay kursigaan iyo Maxamed Xuseen Mukhtaar, waxaana markale kursigaan ku guuleystay Shariif Maxamed Cabdalla.
Shariif Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu helay 79 cod, halka Musharrixii la tartamayay ee Maxamed Xuseen Mukhtaar uu helay 19-cod, waxaana halaabay 3 cod, sida uu shaaciyey guddiga.
Kursiga 3-aad: HOP#176 waxaa kursigaan ku tartamay Maxamed Mursal Maxamuud Boorow iyo Cabdixakiin Mustaf Ibraahim, waxaana ku guuleystay Maxamed Boorow oo asagu hore ugu fadhiyay kursigaan.
Sida uu sheegay guddiga Maxamed Mursal Maxamuud Boorow ayaa helay codad gaaraya 73 cod, halka musharaxii la tartamayay ee Cabdixakiin Mustaf Ibraahim uu heley 26 cod, sidoo kale waxaa halaabay hal cod.
Kursiga 4-aad: HOP#046 waxaa kursigaan oo horey ugu fadhisay Raabaco Sheekh Nuur maanta ku tartamay Maxamed Wardheere Cabdi iyo Cabdulaahi Samow Cusmaan, waxayna guushu ku raacday Maxamed Wardheere.
Maxamed Wardheere Cabdi ayaa helay codad gaaraya 83 cod, halka Cabdulaahi Samow Cusmaan oo ah musharaxii la tartamayay uu helay 11 cod, waxaana halaabay hal cod oo keli ah.
Kursiga 5-aad: HOP#156 oo ahaa kursigii ugu dambeeyay ee maanta doorashadiisa la qabto ayaa waxaa ku tartamay Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Ibraahim Isaaq, waxaana ku guuleystay Maxamed Aadan Maxamed.
Maxamed Aadan Maxamed oo ah guuleystaha kursigaan ayaa waxa uu helay codad gaaraya 88 cod, Maxamed Ibraahim Isaaq oo ahaa musharaxii la tartamay uu heley 10 cod, sidoo kale waxaa halaabay laba cod, sida uu sheegay guddiga.
Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa noqoneysa maamulkii ugu horreeyey ee soo doorta xildhibaano cusub, kadib heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Doorashada Golaha Shacabka ayaa qorshaha uu yahay in la soo gaba-gabeeyo 25-ka Febraayo, si markaas loo guda galo tan madaxweynaha oo haatan si weyn la isugu hayo.
Maxay yihiin labada arrin ee Farmaajo uu ka sheegay shirka Midowga...
Addis Ababa (Caasimada Online) – Madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo|) oo ku sugan caasimada Itoobiya ee Addis Ababa ayaa khudbad...
QODOBADA UGU XIISAHA BADAN DAGAALKA RUUSHKA I UKRAINE | CAALAMKA
GALMUDUG oo shaacisay kuraastii ugu badneyd ee doorashada golaha shacabka
WIIL SOMALIYEED OO DHABARKA DHAAWAC KA SOO GAARAY #UKRAINE
DEG DEG: Hantidhawrka guud oo ka horyimid tallaabo ay qaadeen Golaha...
Sheekh SHARIIF oo jawaab culus kasoo saaray qoralkii kasoo baxay hay’adda...
DEG DEG GOLAHA WASIIRADA OO XAALADA DALKA & DOORASHOOYINKA ,,,
DEG DEG: Midowga Murashaxiinta oo ku dhowaaqay shirweyne iyo tallaabo ay...